Cryptocurrency mgbanwe iwu ka ha kwụsị ore azụmahịa site German regulator
German Financial nlekọta Authority (BaFin) ka iwu Crypto.exchange GmbH, a Berlin dabeere exchange, ozugbo kwụsị eme ka a ego ore.
The iji e nyere mgbe mgbanwe mara na na ya website, btc-now.de, na ọ ga-ere ahịa si bitcoins euro na-ere ha na a ngwaahịa mgbanwe, kwuru BaFin na a kwuru. The ike na-ekwu zuo price ga-agafere nke investors n'ime 30 nkeji, ọ na-agbakwụnye.
Dị ka BaFin, ego ọrụ azụmahịa ejikwara site Crypto.exchange GmbH ọbụghị site regulator. The ego Watchdog were mkpebi mgbe ọrụ na-ekwu na ha na-enweta ihe ọ bụla ego maka cryptocurrency na e zigara ya na ike, Bloomberg ekwu.
Sberbank si Swiss enyemaka ga-ahia na cryptocurrency
The enyemaka Ọdịdị nke Sberbank na Switzerland na-akwadebe na-amalite trading na cryptocurrency maka ndị ahịa, kwuru Andrei Shemetov, osote onyeisi oche nke Sberbank na isi nke zuru ụwa ọnụ ahịa nke ego – Sberbank CIB. Nke a bụ nke mbụ a ọrụ nke ụdị a na-awa site Russian mmiri.
“The ngwaahịa bụ nnọọ ize ndụ, na volatility bụ nnọọ nnukwu, n'ihi ya, anyị agaghị enye ọrụ ndị a ka a dum uka nke ndị ahịa… Anyị na-ugbu a na-akwadebe dum akụrụngwa na iji na-amalite na-enye ọrụ n'ime Swiss enyemaka… Anyị na-ewu a full trading Mbido nke mere na anyị nwere ike ma na-emeghe anyị ọnọdụ na-enye ndị ahịa ọrụ, na bụ, zụta na-ere ahịa.”
Samsung malitere mmepụta adọ maka ASIC ibe maka cryptocurrency Ngwuputa
The Bell (Korean ozi ọma website) na-akọ na Samsung ka bidoro ibipụta ibe maka Bitcoin Ngwuputa a ọnwa.
The akụkọ na-ekwu na Samsung ama aka a nkwekọrịta na a Chinese ngwaike ụlọ ọrụ metụtara Bitcoin Ngwuputa, ma malite mmepụta ugbua na ibe – ehota ihe unidentified Samsung ukara.
Ọ na-aga na-ekwu na Samsung ama nwekwara dechara mmepe nke ASIC Semiconductors maka Bitcoin Ngwuputa afọ ikpeazụ.
Ha na-eche na ọ na ...
Next Post:Olee otú na-a blockchain Mmepụta